आउने भयो उड्ने बाइक – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार ००:३८ English
आउने भयो उड्ने बाइक
एजेन्सी । के तपाईंले कहिल्यै उड्ने मोटरसाइकलको कल्पना गर्नुभएको छ ? तर, सामान्यतया कल्पना नगरिएको यस्तो मोटरबाइक अब वास्तविक रूपमै देख्न पाइने भएको छ । चेक गणराज्यमा अनुसन्धानकर्ताले उड्ने बाइकको परीक्षणसमेत गरिसकेका छन् । चेकको राजधानी प्रागमा भएको उक्त परीक्षण उडानका क्रममा जमिनबाट चार–पाँच मिटर माथि पाँच मिनेटसम्म उडेर यताउता चक्कर लगाएर उक्त मोटरसाइकलले सफलतापूर्वक जमिनमा अवतरण गरेको थियो । ९५ किलोग्राम तौलको उक्त मोटरसाइकललाई रिमोटबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उक्त बाइकको अगाडि–पछाडि र अगलबगल गरी चारैतिर ब्याट्रीबाट चल्ने प्रोपेटर फिट गरिएको छ, जसले एकप्रकारको पङ्खाको काम गर्दछ र उड्नका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्ने काम पनि त्यसले गर्दछ ।
यस मोटरसाइकलको आविष्कारबाट दुईपाङ्ग्रे सवारीका कारण हुने सडकको भीडबाट मुक्ति मिल्ने अपेक्षा गरिए पनि क्षणक्षणमै ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने समस्या रहेकाले उड्ने मोटरसाइकलको व्यावसायिक उत्पादन तत्काल हुनेमा भने आशङ्का गरिएको छ ।
५ असार २०७०, बुधबार ०८:२२ मा प्रकाशित